Uchwepheshe we-Semalt: Wie Man Erfolgreiche Inhaltsforschung Laufen Lässt
Ukumaketha kwe-Digital kubalulekile kumabhizinisi anesiteji se-intanethi. Ngokumaketha kwe-digital, iwebhusayithi isanda ukwandisa isisekelo sekhasimende layo kanye nezinzuzo. Amasu amaningana angasiza ekwandiseni ukubonakala kohlobo kubathengi be-intanethi. Ezinye zalezi zindlela zibandakanya ukuthuthukiswa kwenjini yokusesha (SEO), imikhankaso yezindaba zomphakathi esebenzayo (SMM) kanye nokukhangiswa kokuqukethwe. Lezi zindlela ziphathelene namaqhinga we-SEO njengokucwaninga kwegama elingukhiye, ukusezingeni, ukubuyisela emuva kanye nokuqhuba imikhankaso eminingi ye-PTC.
Ngenkathi yokumaketha kokuqukethwe, kunezindlela eziphumelelayo ngenxa yokuthi abantu bathola okuqukethwe okuphezulu kumawebhusayithi abo. Abanomabhizinisi abaningi babhekene nenkinga yokukhetha phakathi kokuqukethwe okuzosetshenziswa. Kule nkathi yedijithali, i-intanethi inezinhlobo zonke zokuqukethwe kwedijithali. Ngomqondo ofanayo, ungase ufune ukwenza okuthunyelwe kwebhulogi yekhwalithi yokuqukethwe kwakho. Abanye bangasebenzisa okuqukethwe okuyinhloko kanti abanye bathembela kokuqukethwe kwesibili. Ngendlela, u-Andrew Dyhan, Semalt uMenenja Wokuphumelela Kwamakhasimende uthatha ukuthi kufanele uhlukanise phakathi kokuqukethwe okuyisisekelo nesekondari ukuphumelela kumkhankaso wokumaketha.
Umehluko phakathi kokucwaninga kokuqukethwe okuyisisekelo nesekondari
Abahlaziyi bachaza ukuthi iningi labafundi bewebhusayithi qhafaza i-URL enomgomo engqondweni. Iningi le-traffic yakho yewebhu ayikhathaleli ngolwazi. Inhloso evamile yokuvakashela iwebhusayithi ukuthola ulwazi noma ukwenza ucingo emsebenzini wesenzo..Kodwa-ke, ucwaningo olujulile abantu bangakwazi ukwazi umehluko, ongathonya isinqumo sabo sokuguqula iwebhusayithi yakho.
Ngokweqile, lena idatha evela ekuqaleni. Kungabandakanya umbono womuntu siqu, umbiko welebhu noma olunye uhlobo lokubika. Imigqa eyinhloko yobufakazi ibonisa umnikazi webhulogi / iwebhusayithi njengombhali, futhi izinhlelo zokusebenza ze-scholarly zingacaphuna iwebhusayithi nesihloko. Ngokuvamile, kungenzeka ukuphinda usebenzise idatha eyinhloko noma ubuyekeze okuqukethwe ukuthi uyisebenzise kwenye isayithi njengomthombo wedatha wesibili. Idatha eyinhloko iphephile, kodwa ezinye izinhlelo zokusebenza zingadinga ukubhekisela. Imithombo yedatha yesibili inhle ngokucaphuna abanye abalobi.
Imithombo yedatha yesibili inesisindo esiningi kunemithombo yedatha eyisisekelo. Zihlanganisa ukucaphuna ezinye izincwadi ezinengqondo kanye nezifundo ezaziwayo. Isibonelo sokungena kwedatha singabandakanya ukujoyina imishwana efana "Ngokusho kocwaningo oluthile lwe-Forrester noma i-Census Bureau." Uhlobo olunjalo lwolwazi luqinisa ukwethembeka kolwazi lwakho okwenza umfundi ahlole imithombo yakho. Ngaphezu kwalokho, ukucaphuna imithombo yesibili kwandisa igunya lekhasi lakho lekhasi. Lesi simo sisiza izinjini zokusesha zikubeke phambili ngaphambi kweminye imithombo.
Njalo ibhizinisi eliku-inthanethi lidinga ukubonakala okwanele kwe-intanethi ukuze kufinyelele kubalulekile amakhasimende. Kulokhu, ukukhangiswa kokuqukethwe kudlala indima ebalulekile ekuqinisekiseni ukuthi impumelelo yalolu daba iyaphumelela. Amabhizinisi asebenzisa ama-SEO agenti enza ezinye zalezi zenzo. Kodwa-ke, kungase kudingeke ufunde ukuthi lezi zindlela zokuthengisa zisebenza kanjani nendlela yokusebenzisa ngayinye ngokuphumelelayo. Ezimweni eziningi, ukumaketha okuqukethwe kungabandakanya izinhlobo ezimbili zesethi yedatha: idatha eyisisekelo nedatha yesibili. Lo mhlahlandlela ungakufundisa umehluko nokuthi yini oyisebenzisayo kwisethi ethile yedatha. Ungakwazi ukukhiqiza idatha yakho kanye nokwenza iwebhusayithi enegunya enezinhlelo eziningi.